ESI WEGHACHI BỌTỊNỤ MALITE NA WINDOWS 8 - WINDOWS - 2019
Esi weghachi bọtịnụ Malite na Windows 8
Eleghi anya ihe ohuru kachasi anya na Windows 8 bu enweghi mmalite bọtịnụ na ngalaba ọrụ. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla nwere obi ụtọ mgbe ọ bụla ịchọrọ ịmalite usoro ihe omume, gaa na ntanetị mbụ ahụ, ma ọ bụ jiri nyocha na panel. Esi weghachite Malite na Windows 8 bụ otu n'ime ajụjụ ndị a na-ajụkarị gbasara usoro ntanetị ọhụrụ ma gosipụta ebe a ọtụtụ ụzọ iji mee ya. Ụzọ ahụ iji weghachite mmalite mmalite site na iji ndekọ Windows, nke na-arụ ọrụ na usoro mmalite nke os ugbu a, ọ dị mwute ikwu, anaghị arụ ọrụ. Otú ọ dị, ndị na-emepụta ngwanrọ ewepụtawo ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụgwọ abụọ na ụgwọ ndị a na-akwụ ụgwọ ma weghachite kpochapụwo Malite menu gaa na Windows 8.
Malite Nchịkọta Nhọrọ - Ịmalite Malite maka Windows 8
Ntọala free Malite Nchịkọta nhọrọ Nyere gị aka ọ bụghị naanị ịlaghachi Malite na Windows 8, mana ọ na-emekwa ya n'ụzọ dị mma ma dị mma. Nchịkọta nhọrọ nwere ike ịnweta taịlị nke ngwa na ntọala gị, akwụkwọ na njikọ na saịtị ndị a na-eleta ugboro ugboro. Enwere ike ịgbanwe ihe oyiyi ma mepụta onwe gị, ọdịdị nke Malite menu zuru ezu na ahaziri ya n'ụzọ ị chọrọ ya.
Site na Malite menu maka Windows 8, nke a na-emejuputa na Malite Nchịkọta nhọrọ, ị nwere ike ịgba ọsọ ọ bụghị naanị ngwa desktọọpụ nkịtị, kamakwa Windows 8 "ngwa nke oge a." Na mgbakwunye, ma eleghị anya nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mmasị na nke a n'efu mmemme, ugbu a ịchọọ maka mmemme, ntọala na faịlụ adịghị mkpa ịlaghachi na ihuenyo mbụ nke Windows 8, ebe ọ bụ na ọchụchọ dị site na Malite menu, nke, kwere m, dị nnọọ mfe. Download mmalite maka Windows 8 maka n'efu na saịtị nke usoro ihe omume reviversoft.com.
Onwe m, m nwere mmasị na usoro Stardock Start8 kachasị. Ihe ndị dị na ya, na nke m, bụ ọrụ zuru ezu nke Malite menu na ọrụ niile dị na Windows 7 (drag-n-drop, opening documents, etc, ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ nwere nsogbu na nke a), nhọrọ dịgasị iche iche ịmepụta nke dabara nke ọma Windows 8 interface, ike ịkpụ na kọmputa site na ịgafe mbụ ihuenyo - i.e. ozugbo ị gbanyechara, desktọọpụ Windows mbụ na-amalite.
Tụkwasị na nke ahụ, arụ ọrụ na-arụ ọrụ na aka ekpe na ntinye ọkụkeys na-enye gị ohere imepe kpochapụla Malite menu ma ọ bụ ihuenyo mbụ na ngwa Metro site na keyboard ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Mmetụta nke usoro ihe omume ahụ - enwere ohere dị naanị maka ụbọchị 30, wee kwụọ ụgwọ. Ọnụahịa ahụ dị ihe dịka 150 rubles. Ee, ihe ọzọ nwere ike iweghachi maka ụfọdụ ndị ọrụ bụ ntụgharị asụsụ Bekee. Ịnwere ike ibudata usoro ikpe nke usoro ihe omume ahụ na saịtị ọrụ nke Stardock.com.
Power8 Malite NchNhr
Ihe omume ọzọ iji laghachi na Win8. Ọ bụghị dị mma dị ka nke mbụ, ma kesaa n'efu.
Usoro nhazi nke usoro ihe omume ahụ ekwesịghị ime ka ihe ọ bụla sie ike - dịka ị gụọ, kweta, tinye, hapụ akọrọ "Launch Power8" wee hụ bọtịnụ na menu Malite ya na ọnọdụ ebe - na aka ekpe. Usoro mmemme ahụ bụ obere arụmọrụ karịa Start8, ọ naghị enye anyị mma obi ụtọ, ma, ọfọn, ọ na-eji ọrụ ya - ihe niile bụ isi nke mmalite menu, maara ndị ọrụ nke mbipute mbụ nke Windows, nọ na usoro a. O kwesịkwara icheta na ndị mmepe nke Power8 bụ ndị mmemme mmemme Russia.
Ọzọkwa, dị ka nke gara aga, usoro a nwere onwe ma dị maka nbudata na njikọ //lee-soft.com/vistart/. N'ụzọ dị mwute, usoro ihe omume ahụ akwadoghị asụsụ Russian, ma, ka o sina dị, ntinye na iji ya ekwesịghị ịkpata nsogbu. Nanị ọgba aghara mgbe ị na-etinye ọrụ a na Windows 8 bụ mkpa ịmepụta otu panel a na-akpọ Malite na taskbar desktọọpụ. Mgbe e kere ya, usoro ihe omume ahụ ga-eji dochie nke a na ntinye menu Malite. O yikarịrị ka n'ọdịnihu, a ga-echeba usoro nke ịmepụta otu panel n'usoro ihe omume ahụ ma ọ gaghị eme ya n'onwe ya.
N'ime usoro ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi anya na mmetụta nke bọtịnụ menu na Malite bọtịnụ, yana ịkwado desktọọpụ desktọọpụ mgbe Windows 8 malitere na ndabara. Ekwesiri ighota na emebere ViStart ka ihe ochicho mma maka Windows XP na Windows 7, mgbe usoro ihe omume a bu oru di nma nke ichota nmalite menu na Windows 8.
Akara Akara Ama maka Windows 8
Na-ebudata ihe omume Classic Shell ka i wee nwee ike igosi Windows Starter button na website klaskshell.net
Ihe ndị bụ isi nke Classic Shell, akara na ebe nrụọrụ weebụ a:
Nchịkọta mmalite nhọrọ omenala na nkwado maka n'ụdị na skins
Malite bọtịnụ maka Windows 8 na Windows 7
Ogwe ngwaọrụ na ogwe ọnọdụ maka Explorer
Panel maka Internet Explorer
Site na ndabara, enwere nhọrọ atọ maka imewe nke Malite menu - "Omuma", Windows XP na Windows 7. Na mgbakwunye, Omume Shell na-agbakwụnye akụkụ nke ya na Explorer na Internet Explorer. N'uche m, ihe ha na-eme bụ kama esemokwu, ma ọ ga-abụ na ha ga-amasị mmadụ.
Na mgbakwunye na nke a, enwere mmemme ndị ọzọ na-arụ ọrụ ahụ - na-alọghachi menu ma malite bọtịnụ na Windows 8. Ma anaghị m akwado ha. Ndị edepụtara n'isiokwu a bụ ihe a rịọrọ ka ha nwee ọtụtụ nzaghachi dị mma n'aka ndị ọrụ. Ndi achọtara n'oge edere edere, mana ha etinyeghi ya ebe a, ha nwere ihe ndeputa di iche iche - ihe di elu maka RAM, ihe omuma, nsogbu nke ojiji. Echere m na nke mmemme anọ a edepụtara n'elu ị nwere ike ịhọrọ nke kachasị gị.